Ungazisebenzisa njani iikhalori ezimbalwa ekupheleni konyaka parties ️ Discover Online ▷ ➡️
Ukuphela konyaka kugcwele imibhiyozo kunye nemibhiyozo. Nokuba yipati, IKrismesi uEva woNyaka oMtsha, iminyhadala sisilingo sokwenene kwabo bakukutya.
Ke ngoko, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba uninzi lokutya okuqhelekileyo kwexesha lipakishwe ngamanani aphezulu kakhulu eswekile, isodiyam kunye namafutha. Nangona kunjalo, iindaba ezimnandi zezokuba ukuba ufuna ukugcina ukutya okusempilweni ngexesha lakho, kukho iindlela zokusebenzisa iikhalori ezimbalwa kwaye ugcine iipawundi ezongezelelweyo kwisikali.
Jonga ukurhweba okulula, iingcebiso zokutya, kunye namaqhinga okuqinisekisa ukuba uhlala usempilweni.
1 Guqula isiselo sakho
2 Ukubheja kwimifuno
3 Yitya kancinci kwaye ngononophelo
4 Hydrate ngokufanelekileyo
5 Baleka kukutya onokukutya nangaluphi na usuku enyakeni
6 Khetha okuhambelana kakuhle
7 Yahlula idessert
Guqula isiselo sakho
Iziphuzo zokuphela konyaka zimnandi, kodwa azihambelani nesondlo esifanelekileyo. Ke ungathini ngohlobo olungelulo utywala, okanye ijusi yetamati enexesha elimnandi? Ukuphepha utywala sisicwangciso-qhinga esihle sokusebenzisa iikhalori ezimbalwa ngexesha lonyaka.
Ngexesha lesidlo sangokuhlwa okanye ixesha lesidlo sangokuhlwa, gcwalisa isiqingatha seplate ngemifuno engekho istatshi. Oku kuyakushiya igumbi elincinci lezinto ezingaphezulu kunye nokutya okunamafutha kunye neekhalori.
Yitya kancinci kwaye ngononophelo
Yonwabela ukuluma nganye: jonga ivumba, iqondo lobushushu kunye nokwakheka kokutya, ukutya ngokuqonda kukubona kunye nemvakalelo xa ulambile kwaye xa uhluthi. Ke ngoko, olu lwazi lwenza kube lula ukugqiba ukuba utye nini kwaye uyeke nini.
Kunqande ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni ngokusela amanzi emini kwaye uphinde uzalise iglasi yakho kwisidlo sangokuhlwa. Musa ukukhohliswa xa ucinga ukuba ulambile xa unokunxanwa.
Baleka kukutya onokukutya nangaluphi na usuku enyakeni
Ezinye iidessert, ezinje nge-chocotone kunye ne-rabanada, ziqhelekile kwixesha. Kodwa ngaba ufuna i-ayisikhrim, iichips, iilekese kunye nokunye ukutya okufumaneka nangaliphi na ixesha lonyaka? Thatha ithuba lokunandipha into ongayi kuyifumana ngoJanuwari, endaweni yokujongana nezinye izinto eziqhelekileyo kubomi bemihla ngemihla.
Khetha okuhambelana kakuhle
Ukuba sempilweni izitya ezisecaleni ozikhethayo, iikhalori ezimbalwa oza kuzitya. Ngale ndlela, khetha ezimbini okanye ezintathu zokuhombisa, kwaye ujonge izithako zakho.
Ukwabelana nge dessert kunye nelungu losapho okanye umhlobo yindlela elula yokonwabela ukuphatha iKrisimesi ngaphandle kokuba ngaphezulu. Ke yabelana ngesilayidi sepayi okanye ipayi efakiweyo kwaye uya konga i-160-250 yeekhalori.